Barak, Debora, ne Yael—Ɔkannifo Foforo ne Mmaa Mmienu a Wɔwɔ Akokoduru | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Telugu Thai Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ɔkannifo Foforo ne Mmaa Mmienu a Wɔwɔ Akokoduru
Yosua dii Yehowa nkurɔfo anim mfe pii. Owui no, na wadi mfe 110. Bere a ɔte ase no, na Israelfo no som Yehowa. Nanso Yosua wui no, Israelfo no fii ase som abosom te sɛ Kanaanfo no ara. Israelfo no gyaee Yehowa som, enti Yehowa maa Kanaan hene bi a yɛfrɛ no Yabin teetee wɔn. Afei Israelfo no su frɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa wɔn. Yehowa maa wɔn ɔkannifo foforo. Yɛfrɛ no Barak. Ɔno na na ɔbɛboa Israelfo no ama wɔasan asom Yehowa.
Odiyifo baa bi a yɛfrɛ no Debora somaa sɛ wɔnkɔfrɛ Barak mmra. Yehowa ka kyerɛɛ Debora sɛ ɔnka asɛm bi nkyerɛ Barak. Ɛne sɛ: ‘Fa mmarima 10,000 na munkohyia Yabin ne n’asraafo, anaa n’asogyafo wɔ Kison subon ho. Wubedi Yabin asogyafo panyin Sisera so nkonim wɔ hɔ.’ Barak ka kyerɛɛ Debora sɛ: ‘Mɛkɔ nanso gye sɛ woka me ho.’ Debora nso kaa sɛ: ‘Me ne wo bɛkɔ. Nanso hu sɛ ɛnyɛ wo na wubekum Sisera. Yehowa aka sɛ ɔbaa na obekum no.’
Debora ne Barak ne n’asogyafo no foro kɔɔ Bepɔw Tabor so. Wokosiesiee wɔn ho maa ɔko no. Sisera tee saa asɛm yi ara pɛ na ɔboaboaa ne nteaseɛnam ne n’asogyafo ano wɔ subon no ho. Debora ka kyerɛɛ Barak sɛ: ‘Ɛnnɛ na Yehowa bɛma woadi nkonim.’ Barak ne n’asogyafo 10,000 no sian bepɔw no kohyiaa Sisera ne n’asogyafo ahoɔdenfo no.
Afei Yehowa maa Kison nsu no yirii. Sisera nteaseɛnam no kaa atɛkyɛ mu enti osii fam guanee. Barak ne n’asogyafo no dii Sisera asogyafo no so nkonim. Nanso Sisera deɛ, oguanee! Ɔkɔhyɛɛ ɔbaa bi ntamadan mu. Yɛfrɛ ɔbaa no Yael. Ɔmaa Sisera nufusu anaa milk nomee, na ɔde kuntu anaa ntama a emu yɛ duru kataa ne so. Ná Sisera abrɛ, enti ɔdae. Afei ɔbaa no wiawiaa ne ho kɔɔ ne nkyɛn, na ɔde dua bi a wɔasen ano feafeaa wuraa ne tirim ma owui.
Barak bae sɛ ɔrebɛhwehwɛ Sisera. Yael fii ne ntamadan no mu bɛka kyerɛɛ no sɛ: ‘Bra na menkyerɛ wo ɔbarima a worehwehwɛ no no.’ Barak kɔɔ ntamadan no mu na okohuu sɛ Sisera awu da hɔ. Barak ne Debora too dwom yii Yehowa ayɛ sɛ wama Israelfo adi wɔn atamfo so nkonim. Mfe 40 a edi hɔ no deɛ, Israelfo nyaa asomdwoe.
“Mmea a wɔka asɛmpa no yɛ asafodɔm kɛse.”—Dwom 68:11
Nsɛmmisa: Dɛn na Debora yɛ de boaa Israelfo? Dɛn na Yael yɛ de kyerɛɛ sɛ ɔwɔ akokoduru?
Dɛn na Bible mu asɛm a ɛfa Debora, Barak, ne Israel asraafo ho no ma yɛhu fa gyidi ne akokoduru ho?